Na-abịa n'oge na-adịghị anya: Akwụkwọ ndị a na-agbagharị agbagha "Mortals Mortals"
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Na-abịa n'oge na-adịghị anya: Akwụkwọ ndị a na-enweta site na ebe obibi ndị na-eso ụzọ
Na-abịa n'oge na-adịghị anya: Akwụkwọ ndị a na-enweta site na ebe obibi ndị na-eso ụzọ
edere ya admin November 22, 2016
Onye dere ya bụ Patti Pauley
Ihe ngosi Anọgide na-anyụ Mansion na-agagharị na ogige Disney bụ otu n'ime ihe ndị a hụrụ n'anya nke Disney geeks na egwu egwu. Ọ bụ ọmarịcha nguzozi nke vinteji Disney n'ihe banyere ịla azụ na-eche n'ime njem ahụ, yana ntakịrị mmetụ egwu nke na-eme ka njem a bụrụ ihe ewu ewu n'etiti ndị na-agba ogige ntụrụndụ. The anọgidewokwa na-anyụ na-agba ịnyịnya ebe ebe "999 obi ụtọ haunts" bikwa meghere mbụ na Disneyland California azụ na August nke 1969 ma zụlite a-eguzosi ike n'ihe na-eso nke Fans n'ụwa nile. Otu a ka o siri dị, Onye nwere ịnụ ọkụ n'obi bụ James H. Carter II nọ na-arụ ọrụ iweta Grim Grinning Ghosts nke ọma ọmarịcha akwụkwọ dabara adaba nke isiokwu ya Ndị nzuzu nzuzu raara onwe ya nye kpam kpam nye omenala ndị ofufe gbara gburugburu ebe nkiri Disney.
Na mmekorita ya na Monster Movie Media na Octacle, Onye isi na onye nnabata nke Creepy Kingdom Podcast Carter na onye isi ọrụ Ryan Grulich na-arụsi ọrụ ike n’ọrụ iji weta ọrụ a. N'ime ọnwa ole na ole gara aga, Carter na ndị ọrụ ya nọ na-agba ajụjụ ọnụ na United States maka doc a na-atụ anya nke ukwuu na ndị nnọchi anya na ndị nnọchi anya egwu dị ka Spooky Dan Walker na Lance Henriksen. Na mgbakwunye, doc ga-egosikwa onye omenka Topher Adam, onye bụbu Imagineer Jason Surrell, Nora See, Tristan Risk, Robert Kurtzman, Dutch Bihary, Sandie Schnieder, Imagineer Terrir Hardin, Axelle Carolyn, na Mike Mendez. Foolish Mortals ga-egosikwa akụkọ ifo Disney Imagineer na animator Rolly Crump nke bụ ezigbo ọgwụgwọ maka ndị isi obodo.
N'oge na-adịbeghị anya, Carter nwere obi ụtọ iji iwepụta oge site na ọrụ ọrụ ya iji zaa ajụjụ ole na ole gbasara ọrụ ahụ:
iH: Kedu ka oru a si bido? Kedu mgbe ị malitere?
JC: Abụ m onye ọbịa nke Podcast Kingdom Podcast nke na-elekwasị anya na nhụsianya nke ihe nkiri Disney na ogige ntụrụndụ. Site na ịme ihe ngosi m enwere ike izute ọtụtụ ndị otu Fans nke Haunted Mansion. Ka ndị Fans ndị ahụ ka m zutere karịa ka m matara etu oke ụlọ ahụ si metụta ndụ mmadụ na nke onwe ya! Ebe ọ bụ na achọrọ m igwu ala, echere m na nke a ga-abụ isiokwu zuru oke maka akwụkwọ! Anyị bidoro ịgba ihe nkiri ahụ n’ọnwa Julaị afọ 2016, ka ọ dị ugbu a, anyị na-akwado ịga n’ihu site na Disemba 2016.
iH: Kedu ihe ọ bụ gbasara ụlọ obibi na-adọta gị nso na ya? Kedu ihe ngosi kachasị amasị gị n'ime njem ahụ?
JC: Dịka nwatakịrị, ụlọ obibi ndị ahụ bụ ebe dị mma iji nweta ọchichiri nke akụkụ ihe. Ya mere, dị ka okenye, ọ bụ ihe nkasi obi inwe ike ịlaghachi n'otu n'ime ebe ịhụnanya m maka macabre malitere! Ebe kachasị amasị m ga-abụ ebe a na-egwu bọl na ndị mmụọ ịgba egwu. Usiongha ndi mmuo na-agba egwu n’iru m ghasara uche m dika nwatakiri! Ọzọkwa enwere ọtụtụ ihe na ebe ahụ nke na ọ na-afọ nke nta ka m hụ ihe ọhụrụ, n'agbanyeghị oge ole m ga-eji!
iH: you na-achọ ka e gosi ya na ụlọ ihe nkiri Disneyland? (n'ihi na nke ahụ ga-abụ epic).
JC: Ebe ọ bụ na ihe nkiri anyị abụghị nke a na-edeghị ede ma ọ bụghị mmekọ na Wallọ ọrụ Walt Disney ma ọlị, echetụbeghị m na fim a na-egosi na Disneyland dị ka ihe ga-ekwe omume. N'ikwu ya, ị dị mma, ọ ga-abụ epic! Maghị, ihe ọhụụ abụrụla…
iH: Ozugbo emechara ya na mgbe emechara ihe nkiri ahụ, olee ebe anyị ga-ahụ ya? Amazon, Netflix?
JC: Anyị ka na-arụ ọrụ etu anyị ga-esi kesaa ihe nkiri ahụ na ndị mmadụ mana mgbe anyị nyochachara nke mbụ, nke ezubere maka ngwụcha Machị / mbido Eprel 2017, anyị na-eme atụmatụ ịlele na ememme ihe nkiri na mgbakọ egwuregwu na egwu dị egwu site na 2017 Ma onye obula nke nyere $ 10 ma obu karie na Mgbasa Ozi Mmecha nke ugbu a tupu nke mbu ga-enwe ohere ị nweta ihe nkiri ahụ n'ịntanetị! Enwere ike ịchọta mkpọsa ahụ na https://www.gofundme.com/nzuzu.
GoFundMe a kpọtụrụ aha n'elu nwere ụfọdụ ezigbo ego na-enye aka maka ndị nyere onyinye gụnyere igbe anumanu nke Ebube mmụọ nke ihe dị mma na naanị onyinye $ 5 na-eme ka ị banye asọmpi ha na-agba maka ndị na-akwado ya gụnyere nyocha VIP na ebe obibi na 2017 Ndị nzuzu nzuzu nke mbụ na Southern California. Pịa njikọ dị n'elu maka mmebi zuru ezu na ebe a na-eji ego ahụ eme ihe ma nọrọ na nche na-esote afọ maka akwụkwọ ozi a na-agba ịnyịnya ibu obere akwụkwọ na-ezighi ezi!
DisneylandNdị nzuzu nzuzuAkwụkwọ nzuzu nke ndị nzuzuAnọgidela Na-agbazi Mgbasa OziJames H. Carter nke AbụọHalọ Egwuregwu Haunt
John Wick Director dị maka Highlander Reboot
Telltale's 'The Walking Dead: A New Frontier' na-abata n'ụlọ n'oge Oge Ekeresimesi